Strategy First - Upcoming Classes - EBS General MBA
၂၀၁၈ ဇူလိုင်။ သြဂုတ်လ တို့တွင် UK ဒီပလိုမာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည်။
Panchan Tower Campus
U Wizarya Campus
Int'l Business Communication
Mgt of Travel & Tourism
ABE Level 6
Level4HNC in Business
BA (Hons) Business & Mgt
SQA Civil Engineering
L4 Diploma in Business IT
L5 Diploma in Business IT
EBS MSc (Marketing)
EBS General MBA
EBS MBA (Finance)
Heriot-Watt MSc (CPM)
4 skiils profesional
4 skills young adults
UK နိုင်ငံ Heriot-Watt University, Edinburgh Business School မှ General MBA
၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလ တွင် တန်းခွဲသစ်များစမည်။
ယနေ့ခေတ် ယှဉ်ပြိုင်မှုပြင်းထန်သော စီးပွားရေးဈေးကွက်တွင် Professional Marketer တစ်ယောက်အနေဖြင့် နိုင်တကာအဆင့်ထိပ်ဆုံးမှ ဦ်းဆောင်နိုင်ဖို့ Edinburgh Business School မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော EBS General MBA သင်တန်းကို Strategy First Institute တွင် အောက်တိုဘာလ မှ စတင်၍ တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ။
Heriot-Watt University ကို ၁၈၂၁ ခုနှစ်တွင် UK နိုင်ငံ၊ Scotland ရှိ Edinburgh မြို့ တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး UK တွင် န၀မမြောက် သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံး အဆင့်မြင့်ပညာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ The Complete University Guide 2019 ranking အရ UK အဆင့် ၃၉ ရှိပြီး QS World's University Rankings 2019 အရ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်များတွင် အဆင့် ၃၀၂ ရရှိထားသော တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တက်ရောက်နိုင်သော နိုင်ငံတကာ MBA များတွင် Ranking အကောင်းဆုံးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာအကြီးမားဆုံး MBA Programme တစ်ခုဖြစ်သည်။
General MBA တွင် သင်ကြားရမည့်ဘာသာရပ်များ
EBS MBA (General) Programme သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိသော အခြား MBA Programme များကဲ့သို့ Top-up Degree မဟုတ်ဘဲ တက္ကသိုလ်တွင် သင်ကြားရသော ဘာသာရပ်များအတိုင်း သင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ EBS MBA (General) တွင် ဘာသာရပ် (၉) ခုကို လေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ Core Subject (၇) ခုနှင့် Elective Subject (၂) ခုကို သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ Core Subject များမှာ
Project Management (Core)
Strategic Planning (Core)
Strategy First တွင် သင်ကြားလျှက်ရှိသော Elective ဘာသာရပ်များမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဘာသာရပ် (၂) ခုကို ရွေးခြယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MBA (General) သင်တန်းအပြင် မိမိလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွင် Specialised သွားလိုသူများအတွက် MBA (Marketing), MBA (HR) နှင့် MBA (Finance) တို့ကိုလည်း တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Specialised MBA ကို တက်ရောက်လိုသူများသည် Core Subject (၇) ဘာသာနှင့် Specialised Subject (၄) ဘာသာကို တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
Applications and Admissions To be admitted to the MBA, you normally needaBachelors degree fromarecognized university (orarecognized professional qualification) and at least three years relevant business experience. If English is not your first language you must also provide evidence of English language proficiency equivalent to IELTS 6.0. Applications will be reviewed and offers made within two week period. Application forms are available online at Strategy First Institute website.
General MBA သင်တန်းကြေးနှင့် ဝင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်
MSc Programme များအတွက် သင်တန်းကြေးမှာ USD 8200 + 4,500,000 ကျပ်ဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် တစ်ဘာသာလျှင် ပေါင် (၁၆၀) ကို ထပ်မံပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ဝင်ခွင့်ရရှိရန်အတွက် တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားရမည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာသတ်မှတ်ချက် IELTS Band 6.0 ရရှိထား ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၂) နှစ် ရှိထားရမည်ဖြစ်သည်။ IELTS ဖြေဆိုထားခြင်း မရှိပါက အင်္ဂလိပ်စာ စစ်ဆေးပေးပါသည်။
Each course is assessed byathree-hours examination, set and graded by Edinbrugh Business School. When you feel you have mastered your subject and are ready to be rested in your knowledge, you simply pay for you exam take it. There are two exam sessions every year, in
June and December at one of more than 400 locations worldwide.
  MSc HRM
Research Method for Business and Management
Sales Force Mananagement
သင်တန်းကြေးများကို AYA Bank ၏ Education Loan လျှောက်ထား၍ အရစ်ကျ
Click here to call us now:+959450177770
#8, Ground Floor, Pan Chan Tower, Bagayar Road, Myaynigone, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar
#239, Pyay Road (near Myay Ni Gone City Mart), San Chaung Township, Yangon, Myanmar
#237, Corner of U Wizara Raod and Dhamazedi Road, San Chaung Township, Yangon, Myanmar
#575,Pyay Road, Helden, Kamayut Township, Yangon, Myanmar
Block 4, Unit 8, Mingalar Mandalay, 73 Road, Corner of Thazin and Ngu Shwe War Road, Mandalay, Myanmar
Kyaukkar Road (Near Ko Tin Hair Shop)
Click here to call us now:+959444555618
မှတ်ချက် - ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ ဘီယာ လုပ်ငန်းများနှင့် အချို့ MLM လုပ်ငန်းများနှင့် ၄င်းတို့၏ ၀န်ထမ်းများကို ၀န်ဆောင်မှုမပေးပါ။